युएस-बंगला विमान दुर्घटना : ३७ जनाको मृत्यु भएको पुष्टी, उपचारमा रहेका अधिकांसको अवस्था गम्भीर !
ARCHIVE » युएस-बंगला विमान दुर्घटना : ३७ जनाको मृत्यु भएको पुष्टी, उपचारमा रहेका अधिकांसको अवस्था गम्भीर !
दुर्घटनामा परी बिनोद राज पौडेल, बसन्त बोहोरा, सोनाम शाक्य र आसिश रंजित दुर्घटनामा परेका छन् । यी ४को नाम बाहिर आएको छ । अन्य ३० जना नेपालीहरु पनि उक्त विमानमा थिए । यसैबीच यूएस बंगलाको विमान दुर्घटनामा ३६ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ ।